जनताले महसुस गर्नेगरी काम गर्न महानिरीक्षक खनालको निर्देशन
काठमाडौं २ वैशाख । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले मानव बेचबिखन, गुण्डागर्दी, लागूऔषध लगायतमा संलग्न अपराधीलाई तत्काल कानूनी दायरामा ल्याउन प्रहरी कर्मचारीहरूले निर्भिक र निडर भई निष्ठाकासाथ काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल पुलिस क्लब भृकुटीमण्डपमा आइतबार उपत्यकास्थित प्रहरी कार्यालयहरूमा
अमरवाणी संवाददाता/काठमाडौँ । २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको ‘गोरखा भूकम्प’ पशुपति क्षेत्रका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक मठमन्दिरहरू क्षतिग्रस्त गरायो । भूकम्प गएको तीन वर्ष वित्नलाग्दा पनि सम्पदा पुननिर्माणको कार्य सुस्त छ । पुनर्निर्माण र सुरक्षा नहुँदा ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक बहुमूल्य सामग्रीरूको
मागपत्र बुझाउन प्रधानमन्त्री ओली पर्खंदै हुम्ली
दाने बोहरा/हुम्ला । वैशाख एक गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिल्सा नाकाको हेलिकोप्टरबाट अवलोकन गर्ने भएका छन् । ‘कर्णाली प्रदेश रारा पर्यटक वर्ष २०७५’ को सुुभारम्म हिल्साबाट गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत प्रधानमन्त्री ओलीले हेलिबाट नाकाको अवलोकन गर्ने कार्यक्रम तय भएको हो । यस्ता छन् हुम्लीका
‘मंगोल आर्मी’द्वारा ‘हिन्दुवादी’लाई धम्की
काठमाडौँ । गत चैत ८ गते मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन (आर्मी) ३ नम्बर प्रदेश इञ्चार्ज डेबिट तामाङका नाममा एउटा पर्चा सामाजिक सञ्जालमा आयो । सो पर्चामा ‘सन् २०२५ सम्म नेपाललाई इसाई राज्य बनाउने भन्दै हिन्दुवादी संघसंस्थालाई धम्क्याइएको थियो । मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनका नाममा त्यस्तो पर्चा भेटिएपछि हिन्दुवादी
काठमाडौँ । गृहन्त्री रामबहादुर थापाले देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न आफूले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएका छन् । ८२ बुँदे ‘गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजनाु सोमबार सार्वजनिक गर्दै मन्त्री थापाले देशमा शान्ति, सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गर्न कार्ययोजनाले मद्दत गर्ने विश्वास गरे । उनले शान्ति सुरक्षाका लागि
महाकालीमा पुल बनाउन नेपालले भारतलाई किन दियो अनुमति ?
दार्चुला । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदि महाकालीमा पुल लगाउन सरकारले भारतलाई अनुमति दिएको छ । गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासनलाई पत्राचार गरी पुल सञ्चालनको अनुमति भारतीय पक्षलाई दिन भनिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ । भारतीय पक्षले माग गरे अनुरूप व्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर
सुशीला सापकोटाले पिपलको एउटा विरुवा ४० हजार रुपैयाँमा बेचिन् । जीतबहादुर खड्काले बोगनबेलीको एउटा विरुवा ५२ हजार रुपैयाँमा बेचे । सुशीला र जीतबहादुर दुवैजना राजधानीमा फूल नर्सरी चलाउँछन् । काठमाडौं नयाँ बानेश्वरमा रोजडेल नर्सरी चलाउने प्रकाश राई एउटा विरुवाको १५ देखि २० हजार रुपैयाँमा बेच्छन् । हजारौं
यसरी राख्नुहोस् आँखामा औषधि
काठमाडौँ । आँखा हाम्रो संवेदनशील अंगमध्ये पर्छ । त्यसैले यसको देखभालका क्रममा निकै होसियारी अपनाउनुपर्छ । साना गल्तीले पनि दृष्टि गुमाउनुपर्ने जोखिम हुन्छ । आँखाको उपचार वा सुरक्षाका क्रममा विभिन्न औषधि वा ड्रप प्रयोग गरिन्छ । ती प्रयोग गर्दा निम्न कुरामा सचेत रहनुपर्छ । औषधि राख्ने व्यक्तिले साबुन
भूमिपीडित र सम्पदाप्रेमीमाथि सरकारको ज्यादति
काठमाडौँ । भूमिपीडित र सम्पदाप्रेमीमाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ । बुधबार माइतीघरबाट नयाँ बानेश्वरसम्म शान्तिपूर्ण रूपमा भएको उनीहरूको प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको हो । काठमाडौं उपत्यकामा सडक विस्तार, फास्ट ट्रयाक, बाहिरी चक्रपथ निर्माणपीडितहरू मिलेर गरेको पदर्शनमा प्रदर्शकारी
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीद्वारा ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान घोषणा
जनकपुरधाम/महिला हिंसासम्बन्धी घटना बढिरहेको बेला प्रदेश २ को सरकारले ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान अघि सारेको छ । मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले मंगलबार प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरमा सयदिने कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान घोषणा गरेका हुन् । यो योजनाअन्तर्गत
नुवाकोट । गौहत्या एवंम गाइको मासु प्रकरणबारे आफूलाई अनावश्यक विवादमा ल्याउन खोजेको प्रदेश नं ३ का उपसभामुख राधिका तामाङले बताएकी छन् । तामाङले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल तथा केही सञ्चारमाध्यमले अमर्यादित गतिविधि देखाएको भन्दै त्यसबाट आफू दुःखी भएको उल्लेख गरेकी छन् । “नेपाल तामाङ
चैते दसैं र रामनवमी आज एकैदिन, शक्तिपीठमा भक्तजनको घुइँचो
काठमाडौँ । चैत्र शुक्ल नवमीका दिन मनाइने रामनवमी पर्व आज श्रद्धा भक्तिपूर्वक भगवान् श्री रामचन्द्रको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ । आइतबार बिहान ७ बजेर ३४ मिनेटसम्म अष्टमी र त्यसपछि नवमी तिथि लाग्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ । अष्टमी तिथिमा सूर्योदय भएका दिन चैते दसैँ र मध्याह्नमा नवमी
पशुपतिका मृग: बाँदरसँग यसरी मिलेर बसेका छन्
मृग नाच्छन्, बाँदर खेल्छ, मृगको शरीरमा बाँदर चढ्छ, आनन्द मान्छ मृग । मृग र बाँदर मिलेर बसेका छन् । अहा, कति सुन्दर दृष्य । यस्तो अपूर्व प्राकृतिक लीला देख्न पाइने ठाउँ पनि छ काठमाडौं उपत्यकामा । पशुपतिनाथ मन्दिर पूर्वपट्टिको डाँडा र जंगलको नाम हो– मृगस्थली । अतितमा मृग विचरण गर्ने ठाउँ भएकाले मृगस्थली
क्षमता र प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्न महिलाहरूलाई प्रधानमन्त्रीको सुझाव
ललितपुर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आरक्षण र संरक्षणमाभन्दा क्षमता र प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्न महिलाहरूलाई आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रिय महिला उद्यमी महासंघले बिहीबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त कुरा बताएका हुन् । आरक्षण केही समयलाई हो ।
काठमाडौँ । दरबारमार्ग बलात्कार प्रकरणका मुख्य अभियुक्त शैलेश कार्की पक्राउ परेका छन् । महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबारमार्गले उनलाई सोमबार राति दरबारमार्गबाटै पक्राउ परेको हो । रामेछाप दुरागाउँ–३ घर भई धुम्बाराही बस्ने शैलेश कार्कीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । शैलेशसहितको समूहले माघ पहिलो
काठमाडौं । यूएस–बंगलाको बिमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा मृत्यु भएका बंगलदेशी नागरिकको शव सोमबार काठमाडौंबाट ढाका लगिँदैछ । ती शवहरूलाई बंगलदादेश सैनिक रंगशालामा राखिने र प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले श्रद्धान्जली दिने कार्यक्रम रहेको बंगलादेशी सञ्चारमाध्यमहरूले
बाबुरामका आदर्श व्यक्ति गौतम बुद्ध
काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपालले गौतम बुद्धलाई पार्टीको आदर्श व्यक्ति बनाएको छ। गत महिना लुम्बिनीमा भएको नयाँ शक्तिको चौथो संघीय परिषद् बैठकले गौतम बुद्ध, काल मार्क्स, चार्ल्स डार्विन, अल्बर्ट आइन्सटाइन र म्याक्स प्लांकलाई पाँच आदर्शका रूपमा मान्ने
रमिते बनेका गाउँलेले पछुताउँदै राधाको सम्मानमा ताली बजाए
देउकलिया । बोक्सी आरोपमा भोलेबाबा भनिने रामबहादुर चौधरी र उनका सहयोगी युवतीले १८ वर्षीया राधालाई कुटपिट गर्दा रमिते बनेर ताली बजाउने गाउँलेले निर्दोष र निहत्था युवतीलाई क्रुर ढंगले कुटपिट गर्दा नबचाएकोमा गल्ती महसुस गरेका छन् । ‘बोक्सी भनेर राधालाई ६ घण्टासम्म कुटपिट गर्दा पनि नबचाउनु गल्ती भएको
प्रथम पशुपति महोत्सव धुमधाम
अमरवाणी संवाददाता/काठमाडौँ । पहिलो पटक पशुपति महोत्सवको आयोजना गरिएको छ । श्रीपशुपतिनाथ ग्वल पुचः समाजले महोत्सवको आयोजना गरेको हो । फागुन ३० गतेदेखि सुरु भएको महोत्सव चैत ७ गतेसम्म चल्नेछ । आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटक प्रवद्र्धन, सनातन हिन्दु धर्म–संस्कृति जागरण, पशुपति क्षेत्रमा मनाइने विविध
नागरिक समाज पार्टीको ‘झुण्ड’ : नेम्वाङ
काठमाडौं । पूर्वसभामुख नेम्बाङले नागरिक समाज देशमा पार्टीको झुण्ड बनेको आरोप लगाएका छन् । सबैका राम्रो र नराम्रो कामको समीक्षा गर्नुपर्ने नागारिक समाज पार्टीको वकालत गर्ने निकाय बनेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिष्ठान र शान्ति र विकासका लागि नागरिक समाजले काठमाडौंमा आयोजना गरेको
छात्रामाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा प्रधानाध्यापक पक्राउ
काठमाडौँ । छात्रामाथि दुर्व्यवहार गरेको गरेको आरोपमा प्रधानाध्यापक पक्राउ परेका छन् । महानगरीय प्रहरी वृत सातदोबाटोले ज्ञानकुञ्ज बोर्डिङ स्कूल ताल्छीखेलका प्रधानाध्यापक शिव कार्कीलाई छात्रामाथि दुब्र्यवहार गरेको आरोपमा उजुरी गरेपछि शुक्रबार राति १० बजे पक्राउ गरेको हो । प्रहरी स्रोतका अनुसार
रमेश दवाडी/पशुपतिनाथ मन्दिरलाई धार्मिक तथा ऐतिाहासिक महत्वका दृष्टिले विश्वमै सर्वश्रेष्ठ मानिन्छ । प्राचीन पूजास्थल, मठ मन्दिर र मूर्तिहरू तथा प्राचीन अभिलेखहरू हुनाले पशुपतिनाथको मन्दिर क्षेत्र खुला संग्रहालय जस्तै देखिन्छ । शैव, शाक्त, वैष्णव, बौद्ध, जैन सौर, गाणपत, नाथ सिख आदि प्रमुख सम्प्रदायका
विमान दुर्घटना : मृतकको पहिचानमा समस्या
काठमाडौँ । यूएस बंगला एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाएकाहरूको सनाखतमा समस्या देखिएको छ । दुर्घटनामा निधन भएकाहरूको विभिन्न अंगहरू जलेका कारण लिंग पहिचान नै कठिन बनेको छ। त्रिवि शिक्षण अस्पताल फरेन्सिक मेडिसिन विभागका विभागीय प्रमुख डा. प्रमोद श्रेष्ठले बिहीबारसम्म ३५ जनाको शव पोस्टमार्टम
२० वर्ष पुराना गाडी चलाउन निषेध,अटेर गरे कवाडीमा लिलाम
काठमाडौँ । सरकारले आजबाट २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक यातायातका साधनलाई पूर्णप्रतिवन्ध लगाएको छ । २० वर्ष पुराना गाडी चलाएको पाइएमा जफत गरी कवाडीमा लिलाम गरिने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले बताए । देशभर गुडिरहेका २० वर्ष पुराना सवारी साधनका कारण वायु प्रदूषण र सवारी दुर्घटना
‘न्याय परिषद् सचिवालयको पत्र गैरकानुनी’
काठमाडौँ । ‘पदमुक्त’ प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले न्याय परिषद् सचिवालयले आफू पदमा बहाल नरहेको भन्दै काटेको पत्र गैरकानुनी भएको बताएका छन् । विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण गराएपछि बीबीसीसँग कुरा गर्दे पराजुलीले परिषद्का सचिवलाई त्यस्तो निर्णय लिने कुनै अधिकार नभएको र त्यो गैरकानुनी
विमान दुर्घटनाका मृतकको पोस्टमार्टम गर्ने एक डाक्टरको कथा
काठमाडौँ । विमान दुर्घटनामा दिवंगतहरूको शव पोस्टमार्टम गर्ने डा.हरिहर वस्तीले मध्यरातिदेखि मंगलबार बिहान दुई बजेसम्म शववरिपरि बिताए । सोमबार राति १० बजे शव अस्पताल पु¥याएपछि त्यसको पोस्टमार्टम मध्यरातबाट सुरु भएको थियो । विमान दुर्घटनापछि झन्डै दर्जन चिकित्सकले घटनाको प्रकृति र परिस्थितिबारे जानकारी